Ukuqasha Ummeli Onguchwepheshe Kumacala Okukhwabanisa Imali e-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Ummeli Wezobuchwepheshe Emacaleni Okuhlukumeza Imali ku-UAE
Igama elijwayelekile elisetshenziselwa ukuchaza le ndlela eyenziwa yizigebengu ezenzisa imfihlo ukufihla umthombo wemali ukuphatha imali noma iHawala. Imali evela ezenzweni zobugebengu ifihliwe ukwenza inzuzo ibonakale ivela emthonjeni ofanele.
Ukubalekela intela, imali engcolile kanye nokugcinwa komthetho
ukusebenzisa imali ngokungemthetho
isenzo sezimali ngokusebenzisa izikhungo zezezimali
Uhlobo lwemikhiqizo nezinsizakalo ezinikezwa ngumkhakha wezinsizakalo zezezimali ziveza lo mkhakha ekusebenziseni kabi imali. Emhlabeni jikelele, amacala okusebenzisa imali anezici ezifanayo.
Kunezingxenye ezimbili zecala. Kunjalo:
Isenzo sokuhlanza imali uqobo.
Izinga lolwazi noma umuzwa ngokuhlinzekwa kwesikhwama noma ngezenzo zezezimali zeklayenti.
Ngabe ukushisa imali / i-Hawala kuhlose ukuzuzani?
Ukwebiwa kwemali kuhlinzeka ngendlela yokuba okonile athole imali noma imali kalula ngaphandle kokusebenzela yona. Esikhundleni sokuthola imali ngendlela esemthethweni, okonile uvimbela ukusungulwa futhi enze ukungena kwemali kalula ngaphandle kokukhokha izintela.
Kwenzeka Kanjani Ukuqongelwa Kwemali e-UAE?
Ku-UAE, ukuqoqwa kwemali yinqubo eyenzeka ngezigaba ezintathu ezihlukile.
Isigaba sokuqala sale nqubo 'ukuwashwa' kwempahla nempahla kanye nomthombo ngenhloso yokuzifihla.
Futhi ukuhlanganiswa, lapho impahla ehlanjululwayo yethulwa emuva emakethe esemthethweni.
E-UAE, i-Abu Dhabi, iDubai, neSharjah, ukuqoqwa kwezimali kubanga ngamasu alula nelinkimbinkimbi. Kubandakanya:
Ukwakhiwa kwesakhiwo: Lokhu kubandakanya ukuthatha isamba semali esincane ukuze ubeke, bese uthenge amathuluzi okuthwalela okubandakanya i-oda lemali.
Ukuthumisa: Lokhu kuvame ukufaka ukuthutha imali kubaphathi bezangaphandle nokufaka ngebhange elingaphesheya, elinemfihlo enkulu noma elaphoqelela ukuqoqwa kwemali kuphela.
Izinkampani Zemali: Izinkampani ezifaka ukheshi kakhulu zingathola imali enobuhlakani futhi esemthethweni ngokuhlangene, zigcine ukuthi zonke zivumelekile. Ngokwenza lokhu, azikho izindleko eziguquguqukayo nenkampani, futhi ukuthola ukungafani kwentengo yokuthengisa kunzima kakhulu.
Ukuhlanza okususelwa kwezentengiso: Ama-invoice angaphansi noma agqitshwe ukufihla ukuhamba kwemali okungekho emthethweni.
Amabhizinisi we-Shell namathemba: Amabhizinisi weShell namatrasti akuvezi ubunikazi beqiniso babanikazi bemali.
Ukuthathwa Kwebhange: Abaphula umthetho wokuphatha imali bathenga isigxobo esilawulayo ezikhungweni zezimali ezinokulawulwa okungekho emthethweni kokulawula imali bese bedlulisa imali ngaphandle kokuhlolwa.
Amakhasino: Umuntu ohlanza imali angadlala ekhasino, akhiphe imali kuma-chip, adinge nenkokhelo. Ube eseyibeka njengesheke ukuyigcina njenge-winnings yomdlalo.
Ukuthengisa izindlu: Izimali ezingekho emthethweni zingasetshenziswa ukuthenga izakhiwo, bese zithengiswa ukuze inzuzo evela ekuthengisweni ibukeke isebenza ngokusemthethweni kubantu bangaphandle. Izindleko zempahla ziyaqanjwa futhi umthengisi uthola ingxenye yenzuzo yobugebengu yokuvuma inkontileka yakho.
Izijeziso Imali engenacala nemigwaqo yentela
Imali engcolile, ubugebengu bezezimali, ukweqiwa kwentela, ubugebengu, isenzo semfihlo sasebhange, Imali yokuxhasa imisebenzi yobugebengu. Ukujeziswa kokudonswa kwemali eDubai noma e-UAE kususelwa ekubalulekeni komhlaba wonke kwento. Ukuqola imali yicala elibi kakhulu futhi uma kwenzeka wena noma othile omaziyo esolwa ngokusebenzisa imali, kubalulekile ukuxhumana nommeli ochwepheshe wokuqola imali ngokushesha. Ngokuqasha ummeli osefakazelwe emacaleni okuxhaphaza imali, uzokwazi ukunciphisa noma yiziphi izihibe ezephula umthetho noma ulwe nalawa macala.
Ungayihola Kanjani Ummeli Wakho Wokukhokhela Imali Namuhla
Amacala okuhlanza imali angaba nzima futhi abe yisicefe. Uma ubhekene necala elinzima lokusebenzisa imali imali, kufanele uthinte ukuzivikela kwezomthetho kwe-UAE okunamakhono ngokushesha okukhulu.
I-Federal Law 9/2014 (okuchibiyela umthetho weFederal Law 4/2002 ophathelene nokulwa namacala okuxhaphaza imali) (i-AKA the New AML Law) yaphasiswa yi-UAE Federal National Council ngo-Ephreli 2013 futhi yaqala ukusebenza ngo-Okthoba 2014.
Izijeziso zokusebenzisa kabi imali ziqine ngaphansi koMthetho Omusha we-AML
Ngokuvamile, izinhlawulo zokusebenzisa kabi imali ziqinile ngaphansi koMthetho Omusha we-AML ngokuqhathaniswa noMthetho Wangaphambili we-AML. Ngaphansi koMthetho Omusha we-AML, ukwehluleka ukubika okwenziwayo okusolisayo kungaheha inhlawulo ephakathi kuka-50,000 300,000 AED no-XNUMX AED noma ukuboshwa.
Ukuphawula umuntu ebuza ngokuthengiselana okusolisayo kudonsela ekuboshweni konyaka owodwa noma inhlawulo ephakathi kuka-10,000 AED no-100,000 AED.
Umthetho omusha we-AML wakheka kuMthetho Wangaphambili we-AML. Umthetho omusha we-AML ulawula ukuxhaswa kwezimali kwezinhlangano ezingekho emthethweni noma ezingabhalisiwe, ukuxhaswa ngezimali kobushokobezi noma ukuthathwa kwemali ezenzweni zokuphanga imali.
imithetho yokusebenzisa imali ilukhuni kakhulu
Izigebengu zixhaphaza amaphuzu abuthakathaka kunethiwekhi yezezimali.